'महिला हिंसा अन्त्य गर्न सवैकाे साथ अावश्यक छ' - PaschimNepal.Com
शेरबहादुर थापा | प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस ११, २०७३ 5:54:40 PM
सुर्खेतमा नागरिक सचेतना केन्द्रको जिल्ला भेला केही दिन अघि मात्रै वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भयाे । जिल्ला भरका महिलाहरू अाफ्ना अनुभव आदान प्रदान गर्न वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका थिए । तर त्याे भेलामा शक्ति समूहका कार्यकारी निर्देशक तथा सामाजिक अभियन्ता सुनिता दनुवार भने प्रमूख आकर्षणको रुपमा रहिन । उनीसँगै पीडा र वेदना खेपेका ३१ जना महिलाहरुले अनुभव आदान प्रदान गरे । दुइ दिनसम्म सुर्खेतमा बसेर काठमाडाैं फर्किनु भएका सामाजिक अभियान्ता दनुवारलाइ सुर्खेतका महिला दिदीबहिनीहरूकाे अवस्था कस्ताे पाउनु भयाे त भनेर पत्रकार शेरबहादुर थापाले कुराकानी गरेका थिए :-
सामाजिक अभियन्ताको रुपमा सुर्खेत बसाइ कस्तो रह्यो ?
मेरो लागि एकदमै राम्रो भयो मैले धेरै कुराहरु बुझ्ने अवसर पाए । यसबेला आफैले प्रत्यक्ष रुपमा सुने । दिदीबहिनीहरुले भोगिरहेका समस्याहरुबारे सुन्न पाउँदा असाध्यै दुखित पनि भए । म उहाँहरुले भोगिरहेको समस्याहरुलाई सुनेर प्रभावित भए । समग्रमा भन्नुपर्दा दुवै खालको अनुभव रह्यो । मध्यपश्चिमका महिला दिदीबहिनीहरुका समस्याका बारेमा जान्ने मौका पाए । मेरो लागि यो महत्वपूर्ण सिकाइ भएको छ ।
नेपालमा महिलाहरुमाथि हुने हिंसा कस्तो देख्नुभयो ?
समग्रमा भन्नुपर्दा पूर्व क्षेत्रमा दाइजो प्रथाको निहुँमा महिलाहरुलाई जिउदैं जलाइने गरिन्छ । त्यहाँ त्यस्तो खालको विभेद पाइयो भने यहाँ बालविवाह, बहुविवाह, छोरी पायो भनेर श्रीमानले हेला गर्ने, सासुससुराले हेला गर्ने, कुटपिट गर्ने लगायतका हिंसा देखें । अझ आमाबाबुको करले अथवा आर्थिक समस्याका कारणले ६–७ कक्षामै पढदाखेरि वालविवाह गर्ने भयानक समस्या देखें । उहाँहरुकै मुखबाट मैले यी हिसांका कुराहरु सुन्न पाएँ ।
तपाइको जीवन संघर्ष निकै दुखान्त रहेको देखिन्छ, कसरी यो अवस्थासम्म आइपुग्न सफल हुनुभयो ? पक्कैपनि हो कि मैले प्रत्येक पाइलामा पीडाहरु झेलेको थिएँ । मैले त्यहि पीडालाई शक्तिमा बदलें र म यहाँसम्म आइपुगे जस्तो लाग्छ । यदि मैले मेरो जीवनमा घटेका घटना घटदै गर्दा आत्महत्या गर्नुपर्छ, समाजबाट भाग्नुपर्छ भन्ने धारणा लिएको भए म यो अवस्थामा पुग्न सक्ने थिइन । मलाई दलालहरुले जुन अवस्थामा पु¥याए उनीहरुलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ र म जस्ता किशोरीहरुलाई बेचविखन तथा अन्य जोखिमबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ मैले आफ्नो कमजोरीलाई शक्तिमा बदलें र विगत तर २० वर्षदेखि यहि अभियानलाई निरन्तरता दिदै आएकी छु ।
नेपालमा रहेका महिलाहरुको जीवन स्तर उकास्न तपाइको भावी योजना के छ ? जबसम्म हामीले महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन सक्दैनौ तबसम्म महिलाहरु हिंसामा, शोषणमा परिरहने मैले देखेको छु । त्यसलाई कम गर्न हाम्रो संस्थाले महिलालाई आर्थिक सशक्तिकरणका लागि कार्यहरु गरिरहेको छ । यहि पक्षमा मेरो वकालत रहेको छ । यदि महिलाहरु आर्थिक रुपमा सशक्त रुपमा भएको भए यस्ता घटनाहरु घट्ने थिएनन, जस्तो लाग्छ । म महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण गरिनुपर्छ भनेर लागिरहेको छु ।
कस्को प्रेरणाले यहाँसम्म आइपुग्नु भयो ? पहिलो त मेरो आफ्नो घटना नै प्रेरणाको स्रोत हो । दोश्रो ओरेकको डाक्टर रेणुराज भण्डारीले मलाई बाटो देखाउनुभएको थियो । उहाँले नै मेरो जिन्दगीको नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्नु भयो । म जुनबेला बम्बैबाट नेपाल आएँ हामी १२ जना पिडित महिलाहरुलाई उहाँले नै नयाँ जिन्दगीको सुरुवातको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । त्यसैगरि भारतको कोठीबाट नेपाल ल्याउनका लागि पहिलोपटक तत्कालिन सिविनका अध्यक्ष गौरी प्रधानले विशेष पहल गर्नुभएको थियो । उहाँलाई म अहिले पनि सम्मान गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा सुर्खेतवासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
महिला माथि हुने हिंसा, महिला बेचविखन, बालविवाह, वहुविवाह लगायतका समस्या न्यूनिकरणका लागि हामी सबै मिलेर अघि बढौं । हिंसामा परेका महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सबै मिलेर अघि बढौं । उनीहरुको क्षमता अभिवृद्वि गर्दै नेतृत्व तहमा ल्याऔं । उनीहरुमा म पनि केहि गर्न सक्छु भन्ने खालको भावना विकास गराऔं । बहुविवाह, बालविवाह लगायतका अन्य सबै प्रकारका महिला हिंसा विरुद्व पुरुषहरुलाई समेत साथमा लिएर अघि बढौं । सबैको सहकार्यमा नै यी समस्याहरुबाट मुक्ति सम्भव छ ।